ကျနော် အလုပ်သမား | maungpeace
← ကျနော် ယုံကြည်ရာ
အမေရိကန် ပညာရေး တစိတ်တပိုင်း →
မြန်မာပြည်က စက်ရုံ အလုပ်ရုံ အလုပ်သမားတွေ လစာတိုးမြှင့်ရေး ဆန္ဒပြကြတာ မြင်တော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ သူတို့ တိုးတောင်းတဲ့ အခြေခံလစာဟာ တလ ကို သုံးသောင်းတဲ့ဗျာ။ ဒေါ်လာ ၃၇ ကျော်ကျော် ပေါ့။ ဒါတောင် ၈၀၀ ဈေးနဲ့ တွက်လို့။ ၁၀၀၀ ဈေးနဲ့ တွက်ရင် ၃၀ ဒေါ်လာဘဲ ရှိတယ်။ ပုံမှန် တနေ့ ရှစ်နာရီ လုပ်တဲ့ လခဟာ တနေ့ ကို တစ်ဒေါ်လာ သာသာ ဘဲရှိတယ်ဗျာ။ ကဲ ဒီလို နိုင်ငံမျိုး မဆင်းရဲ ဘယ်နိုင်ငံမျိုးက ဆင်းရဲတာလဲ။
မနှိုင်းကောင်း မယှဉ်ရာဗျာ ကျနော် ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နဲ့ နှိုင်းလိုက်ဦးမယ်။ ဒီမှာ အနိမ့်ဆုံး လခဟာ တစ်နာရီ ၇.၂၅ ဒေါ်လာပါ။ ရှစ်နာရီ လုပ်ရင် ၅၈ ဒေါ်လာပါ။ တပတ် နာရီ ၄၀ အတွက် ဒေါ်လာ ၂၉၀။ တလ ဒေါ်လာ ၁၁၆၀ ပါ။ တနှစ်ဆိုရင် ၁၃၉၂၀ ပါ။ ဒါ အခြေခံလစာပါ။ တခြား အခွင့်အရေးတွေ ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးတာ၊ လစာနဲ့ ခွင့်တစ်လ ပေးတာတွေ၊ နာမကျန်းခွင့်တွေ မပါဝင်ပါဘူး။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲအတွက် အဲဒီ လောက်ဘဲ ရရင် ဆင်းရဲတဲ့ အမှတ်အသား သတ်မှတ်ချက် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ ၁၁,၀၀၀ ကျော်ရုံဘဲ ရှိပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ အမှတ်အသားက မိသားစု လေးဦးပါ (ခလေး နှစ်ယောက်၊ အမေ၊ အဖေပါဝင်တဲ့) အိမ်ထောင်စု တစ်စု ဟာ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၂၃၀၀၀ အောက်ပဲ ရတယ်ဆို…ဆင်းရဲတယ် လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခြေခံလစာဘဲ ရတဲ့ လေးဦးပါ မိသားစု မှာ အဖေရော၊ အမေရော အလုပ်လုပ်ပါမှ ဆင်းရဲတွင်း က လွတ်မှာပါ။ မလုပ်နိုင်ရင်တော့ ဆင်းရဲတယ် လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ အဲဒီလို မျိုး လူ ၁၆ ရာနှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ လူဦးရေ သန်း ၃၀၈ ကျော်ရဲ့ ၁၆ ရာနှုန်း ဆိုတာ ၄၈ သန်း ကျော် ရှိတယ် လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ဒီလူတွေကို အစိုးရ ကထောက်ပံ့ပါသေးတယ်။ ထောက်ပံ့ကြေး အနည်း အများ၊ ပုံစံတွေက ပြည်နယ် အလိုက်ကွာခြားပါသေးတယ်။ အသက် ၁၈ အောက် ခလေး ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စု အတွက် Food stamps (အစားအသောက်ဝယ်ခွင့် လက်မှတ်) လစဉ်ထောက်ပံ့တာ၊ ကျန်းမာရေး ဆေးကုသခွင့် (medicaid) ပေးတာ၊ ခလေးတွေ ၁၂ တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာသင်ခွင့် အပြင် ကျောင်းမှာ နေ့လည်စာ အခမဲ့ ကျွေးပါသေးတယ်။
ကျနော် တို့ နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ကြားရေးဟာ အလကား နီးပါးဖြစ်ပေမဲ့ ကျောင်းကို ခလေးတွေ လာဖို့ အထိတော့ မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ အစားအသောက် ဝယ်ခွင့် ပေးတာတွေ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးတာတွေ အများကြီး လိုအပ်နေပါသေးတယ်။….
This entry was posted in opinion (ကိုယ်ယုံကြည်ရာ) and tagged Burma, labors, minimum wages, Myanmar, rights. Bookmark the permalink.